Muzvinafundo Chikowero Vokurudzira Vatema Kuti Vanyore Nhoroondo Yavo
Muzvinafundo Mhoze Chikowero
Muzvinafundo Mhoze Chikowero avo vachangonyora bhuku rinonzi, “African Music, Power and Being, Colonial Zimbabwe”vari kukurudzira vana veZimbabwe kuti vanyore mabhuku anorondedzera nekuchengetedza nhoroondo yavo sevanhu vatema.
Muzvinafundo Mhoze Chikowero avo vachangonyora bhuku rinonzi, “African Music, Power and Being, Colonial Zimbabwe” vari kukurudzira vana veZimbabwe kuti vanyore mabhuku anorondedzera nekuchengetedza nhoroondo netsika dzavo sevanhu vatema.
VaChikowero vanodzidza paUniversity of California, Santa Barbra muno muAmerica vanoti vanozviziva havo kuti hazvisi nyore kunyora mabhuku anotambirwa sezvo vachena vange vagara vachiita basa rekunyora nhoroondo dzevatema iri vanombogona kusunga ndare munzira asi vati izvi hazvifanire kuodza vanhu moyo.
​Vanoti vari kumbofambawo nemuimbi ane mukurumbira Thomas Mapfumo muno muAmaerica vachiverenga bhuku ravo VaMapfumi achiridza mbira.
Bhuku iri rinotarisa nhoroondo yenyika kuburikidza nenyaya dzezvemimanzi kubva kuma 1890. Vanoti bhuku ravo rinoburitsa pachena kuti vachena vakayedza kuparadza nziyo dzevatema kubva zvakarwiwa Chimurenga chekutanga asi zvakakona n'anga murapwa achida.
Vanotarisa zvakare zvakaitika kumakore ekuma 1930 uko vanhu vainge vobva kumamisha vachienda kumadhorobha vozosvikawo kumakore ekuma 1970 uko vaimbi vakaita saThomas Mapfumo, Dorothy Masuka, Zexie Manatsa nevamwe vaimba nziyo dzeChimurenga nekukurudzira varwi vehondo yeChimurenga.
Muzvinafundo Chikowero vakaita zvidzidzo zvavo paUniversity of Zimbabwe apo vakaita BA degree muzvidzidzo zveEconomic History. Vakazonoita zvidzidzo zvavo zveMasters ne Ph.D pa Dalhousie University kuCanada.
Vasati vaenda kuUniversity of California vakambodzidzawo paRutgers University vachiita zvidzidzo zvepamusoro soro.
VaChikowero vanoshandawo sechipangamazano paMbira Centre iyo iri muZimbabwe.
Hurukuro naMuzvinafundo Mhoze Chikowero